Xildhibaanada Beesha ku Matala Dowlada Federaalka Oo kulmey Ajendahoodase maku Jirey in ay Wax Ka Badalaan ? – hareerley News
Xildhibaanada Beesha ku Matala Labada Aqal ee Dowlada Federaalka Oo kulan yeeshey ayaa waxaa kulankooda ku Sheegey is Wareeysi dheer ka dib in ay ka Wada hadleen dhamaan Degaanada ay ku Matalaan Beesha hadii ay ahaan laheyd dhanka Sisaasada,Amniga .dhaqaalaha iyo dhamaan Arimaha iyo Baahiyaha Bulshdu Tabaneyso.
Xildhibaanaada ayaa intaasi ku darey in ay u heelan yihiin haatan sidii ay shaqo Abuur ugu Sameyn lahaayeen dhalinyarada iyo Waliba waxay sheegeen in ay kobcin doonaan dhanka Isbootiga waa sida hadalka loo dhigaye ,
Xildhbaanadan aayaa hadalkooda ku soo Gabagabeeyay “Dhawaan ayay aheyd markii Xildhibaanadu ka qeyb Qaateen mashaariic lagu hormarinayo dhanka Ciyaaraha (Sport) oo ay ilaa 22 kooxood u diyaariyeen Agabka cayaarahooda.
Waxaana naga go’an inaan mar walba isku xirnaano oo aan ka wada shaqeyno danaha guud ee deegaanka iyo Beeshaba ”
Xildhibaanadan Ayaanan wali ka hadal Cadka kaga MaqanBeesha K/Galbeed Oo iyadu wali u Yagleelan Sidii Shariifka Oo kale.
Posted on June 9, 2020 June 9, 2020 Author Hareerley News
Ra’isal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed Cali ayaa maalinti shalay ahayd hor tagay baarlamaanka dalka Itoobiya oo yeeshay kalfadhigii 5-aad ee aan caadiga ahayn halkaas oo ay mudanayaasha golaha su’aala kala duwan ku weydiiyen. Su’aalaha la weydiiyey Abiy Axmed ayaa ku qotomay doorashada, khilaaf Suudaan iyo Itoobiya, Khilaafka biya xireenka Masar iyo Itoobiya, warbixinta Amnesty, […]
Somaliland oo imtixaanadii shaaahdiga ahaa ee sanadkan Covid_19 awgeed u baajisay
Maalinta sabtida ah ee fooda inagu soo haysa 27ka June waxa jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbnaannida ee Somaliland looga dareerayaa qaadista imtixaanada shahaadiga ah ee dugsiyada sare oo kaliya. Waxaa sanadkan Meesha ka baxday imtixaanadii laga qaadi jiaray fasalada 8deed ee dugsiyada dhexe ee shahaadiga ah iyada oo wasarada waxabarashyadu sheegtay in arday tiradoodu gaadhayso […]
Félicien Kabuga, oo ku jiray diwaanka eedeysanayaasha aadka loo doon-doonyay doorkii ay ku lahaayeen xasuuqii Rwanda ayaa lagu xiray magaalada Paris ee dalka Faransiiska, sida ay shaacisay wasaaradda caddaaladda ee dalkaasi. Mr Kabuga ayaa la sheegay inuu ku noolaa nawaaxiga Paris isagoo isticmaalayay magac been-abuur ah. Maxkamadda gaarka ah ee Dambiyada Caalamiga ah ee Rwanda […]